Wadala Abatshali for engadini ngezandla zakhe - akuve elula, esiwusizo, futhi iningi ezishibhile kakhulu indlela ukukhula ensimini yase Izimbali unyaka, amakhambi nezihlahla ngisho naphakathi. Lezi isitsha sezimbali asetshenziselwa ukutshala izitshalo ukushisa-onothando, okuyinto lapho kuqala kubanda kuyoba elula kakhulu ukuba ngisithwale egumbini. Kubalulekile futhi ukuba sikhumbule ukuthi izitshalo abatshalwé izimbiza namavazi, zidinga ukunakekelwa ngokucophelela futhi ukuthambisa avamile. Kodwa lapha, kufanele uhambisane ngesilinganiso: amile amanzi uzoshesha kuholele impande bola nokufa kwezimila.
Ukuze wenze izimbiza for engadini ngezandla zakhe kungaba noma yini, kuhlanganise ukungcola impahla. Esikhathini course kubhavu lokhuni, isitsha sezimbali Ceramic, ubudala ingane okugeza ngisho amabhuzu enjoloba. Kodwa impahla ethandwa kakhulu kuyakhanya ubudala isondo Bald. Nansi ngempela eziningi amathuba landscape umsebenzi, into esemqoka - musa uzethembe. Izimbiza amathayi esetshenziswa njengoba ngokoqobo futhi umbhede, njengoba nje umhlobiso. Zingase ukubeka emnyango icebo engadini. Abatshali for engadini kukhona elula eziyinkimbinkimbi, phansi futhi okwesikhashana. Ngaphezu kwalokho, isitsha sezimbali ukukwenza kokubili umile futhi ephathekayo. Into eyinhloko engavumelana isithombe jikelele futhi esiyinhlanganisela kuhlangene nezinye izinhlobo lokubhalela.
Ngakho, ukuze senze amabhodwe for engadini ngezandla zakhe, uzodinga isondo ubudala Ummese obukhali noma Bulgarian. I izimbali okucebile kukhona ngesimo izilwane nezinyoni. Kusukela isondo abavamile usike nefukezi, ufudu, umkholwane, upholi futhi ngisho ihlengethwa. Esikhathini ukukhiqizwa uqhwaku lenyoni inqanyulwa kusuka kwamapulangwe sokhuni nasezinsikeni irabha esebenzisa we umshudo kokungathembeki. Ngaphambi kokuqala usike isondo, ishiywe amahora ambalwa ngaphansi ilanga elishisa bhé, ukuze lube ethambile. izingxenye ezincane kungenziwa nasezinsikeni amabhodwe ngosizo ifenisha ukudla noma izipikili encane. Ukuze ukuthi leli sondo kulula ukusika, ummese ngezikhathi bacwilisa ngamanzi abandayo.
Kunezindlela izimfihlo ezimbalwa ezibalulekile kufanele banganakwa enkulu ekwakhekeni amabhodwe for engadini ngezandla zakhe. Ngokwesibonelo, ngaphambi kokuba yokudweba umkhiqizo kumele njalo degreased. Lokhu kungenziwa evamile isidlo yokuwasha. Futhi ngokucophelela akhombe imibala. Abaningi waphawula ukuthi ababethi matt umbala ethafeni izimbiza bheka Clumsy, eliphaphathekile futhi ushibhile kakhulu.
Kulula izimbiza ezenziwe futhi ilenga. Indlela elula - iwukuba unciphe ngesigamu isondo, okwenza iziqobosho, elula intambo bese uvala nhlangothi zombili. Ngokuvamile, amabhodwe ezinjalo ezibekwe phezu Veranda, pergola, mayelana zokugeza noma igalaji. Kodwa hamba them evulekile is hhayi Kunconywa, njengoba izikhukhula razmoyut ngokushesha inhlabathi, wokwembula izimpande izitshalo. Kodwa uma amabhodwe kwesokunxele emgwaqeni, ngikubheka njengelungelo izimbobo amanzi nendawo ngokufanele. umxhwele kakhulu ukubukeka isitsha sezimbali, elenga zingcingo nezindonga zezakhiwo. Kodwa-ke kumele kukhunjulwe ukuthi imoto esindayo amathayi. Ngakho-ke, isisekelo yasibamba yabo kubalulekile ukwenza uqine kakhulu. Abatshali ukulengiswa bheka petunias limnandi, pelargoniums, begonias futhi ivy ezahlukene.